I-Huawei Nova 2S, ikhamera yangemva nangaphambili | Iindaba zeGajethi
IHuawei Nova 2S, iikhamera zangaphambili nangaphambili
Umenzi waseTshayina uHuawei uyaqhubeka nokukhulisa ikhathalogu yakhe yeziphelo ezisekwe kwi-Android. Ngenye yeenkampani ezithengisa esona sixhobo ehlabathini. Kwaye eSpain yenye yeentandokazi kuluntu kunye ne-Samsung okanye iApple. Ewe, ukuze inganqabi, ivelise i-smartphone entsha: IHuawei Nova 2S.
Lo mahluko ophakathi kwinqanaba leqela liqela imi ngokuthe gabalala kwicandelo le Iiflithethi kwaye iyenza uyilo olungenasiphelo. Oko kukuthi, iHuawei ilandela imeko yangoku kwaye ayifuni kuphelelwa yinxalenye yepayi. Ewe kunjalo, njengoko kunjalo nakwezinye iimodeli, asizazi iinjongo zenkampani zokuthatha le Huawei Nova 2S ngaphandle kwe China.
1 Isikrini kunye namandla eHuawei Nova 2S
2 Ukufota yeyona nto yomeleleyo: ii-sensors ezimbini zokuhlangula
3 Ukufumaneka kunye namaxabiso
Isikrini kunye namandla eHuawei Nova 2S
Okwangoku, Iimpawu zobugcisa zale fowuni smart azishiyi nabani na ongakhathaliyo. Okokuqala, isisu semoto sayo sisinyithi. Ziyanda iinkampani ezishiya iiplastiki ecaleni kwaye zikhetha ngaphezulu premium. Kwakhona, umboniso ufezekisa idiagonal yee-intshi ezi-6 kwaye isisombululo sayo yi-HD epheleleyo + (Iipikseli ezingama-2.160 xx 1-080).
Ukuqhubeka, ngaphakathi kwale Huawei Nova 2S siya kufumana iprosesa esayinwe yiChina buqu. Ngokukodwa sithetha ngeKirin 960, a I-chip yokuba i-Huawei Mate 9 yaqala ngonyaka ophelileyo. Okwangoku, imemori ye-RAM inokuba yi-4 okanye i-6 GB-siya kuba namandla aneleyo okuphatha ngaphezulu kwesicelo esinye esivulekileyo kwaye sisebenza ngaxeshanye.
Ngokumalunga nokugcinwa kwangaphakathi, uHuawei uxela ukuba kuya kubakho ezahlukeneyo ezimbini: i-64 okanye i-128 GB. Kwimeko yokugqibela siya kuba nakho ukukhetha i-6 GB ye-RAM, ngelixa sinomgangatho osemgangathweni unokukhetha zombini i-4 okanye i-6 GB ye-RAM.
Ukufota yeyona nto yomeleleyo: ii-sensors ezimbini zokuhlangula
Siza kwinxalenye yokufota. Kwaye siyenza ngokuphawula, mhlawumbi, eyona ndawo inamandla kule Huawei Nova 2S. Kwaye ngaphambili nangasemva siya kuba nekhamera ye-sensor ezimbini. Oko kukuthi, singadlala ngasemva kwebala. Kwimeko yekhamera yangemva siya kuba nefayile ye- I-16 kunye ne-20 megapixel sensor. Ngelixa ngaphambili bobabini banesisombululo see-megapixels ezingama-20.
Ibhetri yale 6-intshi ye-smartphone ine Umthamo wama-3.340 we-milliamp, eqinisekisa -kuxhomekeke ekusetyenzisweni kwayo- ukuze ikwazi ukufikelela esiphelweni sosuku ngaphandle kokungena kwiplagi kwakhona. Okokugqibela, inguqulelo ye-Android ene- phablet es I-Android 8.0 Oreo, yokugqibela kwimarike.
Ukufumaneka kunye namaxabiso
Njengoko sele sikuxelele, akukho lwazi malunga neHuawei Nova 2S ephuma eChina. Apho iya kuthengiswa ukusuka nge-12 kaDisemba. Kwaye amaxabiso eenguqulelo ezikhoyo, njengoko kucacisiwe kwisango Gizmochina, iya kuba yile ilandelayo:
Inguqulelo ye I-4 GB ye-RAM + i-64 GB yokugcina: I-350 euro
Inguqulelo ye I-6 GB ye-RAM + i-64 GB yokugcina: I-385 euro
Inguqulelo ye I-6 GB ye-RAM + i-128 GB yokugcina: I-435 euro
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IHuawei Nova 2S, iikhamera zangaphambili nangaphambili
I-Nommi, i-4G umzila weselfowuni onamathuba amaninzi